FAQs loogu talagalay Company
Sidee baad u hubiyo tayada alaabta aad?
Waxaan ku adkeeyey silsilad sahayda kaamil ah wuxuu ka kooban yahay iibiya fiican si adag filtrated iyo wax soo saarka kasta oo lagu baari doonaa ka hor inta uusan our warshad.
Ha aad qabto wax shahaadooyin taas oo loo baahan yahay in our suuqa?
Haa, oo dhan ee alaabta waa ETL / CETL / CE / ROHS / CEC shahaado. Waxaan sidoo kale codsan kartaa shahaadada gaar ah in loo baahan yahay in aad suuqa.
Ma waxaad u baarka? waa lacag la'aan ama inaan la siin?
Baarka waxaa laga heli karaa adiga, laakiin waa in la bixiyaa. Waad ku mahadsan tahay fahamkaaga si raxmad leh.
Sidee ku saabsan shuruudaha lacag bixinta?
T / T waxaa ugu talinayaa, Paypal / Western Union / LC iyo shuruudaha kale ee lacag bixinta ayaa sidoo kale la aqbali karo
aad sameyn karto OEM noo taraya?
Haa, waxaan la OEM, ODM, OBM siiyaan si ay ula kulmaan shuruudo kala duwan ee ganacsiga.
Sidee waa damaanad?
Waxaan ku siin 12 bilood damaanad tan iyo alaabta our warshad ka tago. Waxa kale oo aanu ku siino suuq muddada-dheer iyo taageero-iib aheyn ka dib, injineer xirfadeed kaa caawin doontaa in ay ku taliyaan soo saarka ugu haboon ka dib markii barashada shuruudaha macaamiishaadu ', iyo astaysto xal loogu talagalay ka mid ah codsiyada gaar ah
FAQs loogu talagalay Products
Maxaad bamka shuqullada aan dhawaajiya cod weyn iyo motor ka noqday mid aad u kulul?
Caadi ahaan waxa weeye waxa keena gaadiidka dulmiga badan, bents usheeda dhexe iyo rotor taabanayo la stator markii motor waxaa socda. Fadlan hubi haddii baakada waa in xaaladiisu wanaagsan tahay marka bamka aad gaadho.
Waa maxay sababta aan bamka biyaha yar barbaro?
Haddii bamka ayaa sidoo kale ka dhigaysa dhawaaq la yaab leh marka si dhib leh barbaro biyaha, fadlan guuriso bamka iyo hubi haddii impeller waxaa ku xayiran dhagaxyadan yar. Tani waxay dhici kartaa in barkadaha cusub ka dhisay marka aad rakibi bamka aan nadiif dhagaxyada yar. Haddii ay buuq qalaad ma jiro, fadlan ka hubi haddii aad u rakiban si fiican, taasi waxay dhici kartaa marka qalabka vacuum aad ku guuldareysto.
My motor bamka la gubo, sida dhici kara?
Fadlan hubi haddii aad khalad banki danab ee bamka danab dual.